सगरमाथा | Nagarik News - Nepal Republic Media
सगरमाथाको नाप र नामकरण
कहिलेकाहीँ अरूबाट हुने व्यवहारले हामी सार्वभौम छैनौँ कि जस्तो लाग्ने गर्छ। प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा बाहिरियाले गरेको खटनपटन देख्दा हाम्रो अर्थनीति, शिक्षानीति, कृषिनीति, औद्योगिकनीति, स्वास्थ्यनीति आदि हाम्रो धरातलमा उभिनुुपर्नेमा उनीहरूको रुचि अनुसार भइरहेको देखिन्छ। उनीहरूको प्रयोगशालाको जस्तो देखिन्छ। अतिथिलाई देवतुल्य मान्ने नेपालीको स्वभाव नै हो। हामीले कहिलेकाहीँ अतिथिलाई यति सम्मान गर्दछौँ, अतिथिले अनुमान नै गरेको हुँदैन।
निर्मल श्रेष्ठ ३ माघ २०७७ शनिबार ११ मिनेट पाठ
सगरमाथाबारे विवादास्पद सामाग्री प्रसारण गरेको भारतीय टेलिभिजन च्यानल जी न्युजले आफ्नो रिपोर्टलाई लिएर स्पष्टिकरण दिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग अन्तर्वार्ता लिएर चर्चामा आएका भारतीय टेलिभिजन च्यानल जी न्युजका प्रधान सम्पादक सुधीर चौधरीले सगरमाथाबारे तथ्यहीन सामाग्री प्रसारण गरेका छन्।
कसरी भयो सगरमाथाको उचाइ मापन ?
२०७६ जेठ ८ गते बिहान ३ वजे नापी विभागका दुई कर्मचारी खिमलाल गौतम र रविन कार्की सगरमाथाको चुचुरोमा पुगे। ४२ दिनअघि सगरमाथाको उचाइ नाप्ने जिम्मेवारीसहित त्यसतर्फ लागेका उनीहरूका लागि ऐतिहासिक दिन थियो।
भुवन शर्मा २७ मंसिर २०७७ शनिबार ५ मिनेट पाठ
सरकारको ढिलासुस्ती, सगरमाथा मापन गर्ने टोलीले अझै पाएन पुरस्कार रकम
सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाई मापन नेपाली प्राविधिक टोलीले सम्पन्न गर्यो। २०७२ को भूकम्पपछि सगरमाथाको उचाईमा बदलाव आएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको थियो। अनुमान जस्तै सगरमाथाको उचाई केही बढेको पाइयो।
प्रशान्त लामिछाने २६ मंसिर २०७७ शुक्रबार ३ मिनेट पाठ
नयाँ उचाइको रणनीतिक प्रतीकात्मकता
मंसिर २३ मा नेपाल र चीनले संयुक्त रूपमा सगरमाथाको नयाँ उचाइ ८८४८.८६ मिटर रहेको घोषणा गरे। यो उचाइ यसअघिको भन्दा ८६ सेन्टिमिटरले बढी छ। सामरिक, राजनीतिक र आर्थिक विकासको पृष्ठभूमिका यो संयुक्त घोषणाले तीन हिसाबले रणनीतिक महत्व राख्छ।
स्वर्णिम वाग्ले २६ मंसिर २०७७ शुक्रबार ३ मिनेट पाठ
नेपालले आफैं गरेको मापनमा विश्वको सबैभन्दा अग्लो चुचुरो सगरमाथाको उचाइ ८६ सेन्टिमिटर बढेको छ। अब सगरमाथाको उचाइ ८ हजार ८ सय ४८ दशमलव ८६ मिटर कायम भएको हो। मंगलबार नेपाल र चीनले एकै पटक सगरमाथाको नयाँ उचाइबारे औपचारिक घोषणा गरेका छन्।
भुवन शर्मा २४ मंसिर २०७७ बुधबार २ मिनेट पाठ
सगरमाथाको नयाँ उचाई ८८४८. ८६ मिटर
सगरमाथाको उचाई थोरै बढेको छ। नेपाल र चीनका परराष्ट्रमन्त्रीले संयुक्तरुपमा सार्वजनिक गरेको नयाँ उचाई अनुसार सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाई ८८४८. ८६ मिटर रहेको छ।
सगरमाथाको उचाइ थोरै बढ्यो
नेपालले आफै गरेको मापनमा विश्वको सबैभन्दा अग्लो चुचुरो सगरमाथाको उचाइ ८ हजार ८ सय ४८ मिटरभन्दा घटेको पाइएन।
भुवन शर्मा २३ मंसिर २०७७ मंगलबार २ मिनेट पाठ
विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको नयाँ उचाइ आज सार्वजनिक गरिँदैछ। नेपाल सरकारले पहिलोपटक आफ्नै प्राविधिक टोलीबाट सगरमाथाको उचाइ मापन गरेर सार्वजनिक गर्न लागेको हो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, नापी विभागले सगरमाथाको उचाइ मापन गरेको हो।
सगरमाथाको नयाँ उचाइ मंगलबार सार्वजनिक हुने
आगामि मंगलबार नेपाल र चीन दुवैले एकैपटक सगरमाथाको उचाइ सम्बन्धी प्रतिबेदन सार्वजनिक गर्ने भएका छन् ।
भुवन शर्मा २२ मंसिर २०७७ सोमबार २ मिनेट पाठ
भुवन शर्मा २ कार्तिक २०७७ आइतबार ३ मिनेट पाठ
पहिलो विदेशी टोलीद्वारा सफल आरोहण
सगरमाथा आरोहण तयारीका लागि नेपाल आएको बहराइनी राजकुमारको टोलीले लुबोचे र मनास्लु हिमालको सफल आरोहण गरेको छ।
मिनराज भण्डारी ३० आश्विन २०७७ शुक्रबार ३ मिनेट पाठ
मिनराज भण्डारी २९ असार २०७७ सोमबार ४ मिनेट पाठ